Debian, Ubuntu, Linux Mint, Fedora uye Arch Linux vatova immune kuKRACK | Linux Vakapindwa muropa
Mumazuva achangopfuura, kushushikana kwakakosha kwakaonekwa mukati meiyo WPA2 protocol, protocol isiri iyo chete inoshandiswa neWindows kana MacOS makomputa asi zvakare inobata makomputa neLinux kernel. WPA2 ndeyekuchengetedza protocol yekubatana, (Wi-Fi Dzivirira Kupinda 2), iyo inoshandisa zvese zvinongedzo zvisina waya.
Iyo yakawanikwa bug inokanganisa iyi protocol, ichibvumira munhu anopinda kuti ave necomputer yekombuta kana kushandisa network zviwanikwa.Bug iyi yave ichizivikanwa seKRACK uye mukati meGnu / Linux inobata mapakeji maviri kana zvirongwa: wpa_supplicant uye hostapd.
Munguva pfupi yapfuura Ubuntu neLinux Mint vakagadzirisa aya mapakeji kugadzirisa KRACK mukati mekugovera kwavo, pamwe nezvinonhuwira zviri pamutemo zvinovakirwa pane izvi zvekugovera. Naizvozvo, isu tinongofanirwa kugadzirisa iyo system kuburikidza nesoftware zvishandiso zveanoshanda masisitimu kuitira kuti KRACK isiri dambudziko kumatimu edu.
Kugoverwa kukuru kwakatogadzirisa KRACK uye WPA2 nyaya
Mazuva apfuura, maDebian, Solus, Fedora uye Arch Linux zvikwata zvekuchengetedza vakaita zvakafanana nezvakagoverwa uye zvipinidzo, vachivandudza iyo wpa_supplicant uye hostpad mapakeji kuitira kuti njodzi yakadaro isazoitika. Parizvino ndivo chete mugove watinoziva nawo wakagadzirisa dambudziko iri. Zvisinei, zvishoma nezvishoma kugovera kunotora nhanho yekugadzirisa iyi bug uye vamwe vanenge vatozviita asi vasina kuzvizivisa kunharaunda yavo.
KRACK muenzaniso wakanaka wekuti nei tichifanira kushandisa kugovera pamwe nekuvandudza kusimudzira, sekufa kwakafa kana kushaya basa kunoshandisa WPA2 hakuzo gadzirise iyi bug uye kuchaisa data revashandisi vako panjodzi. Naizvozvo, zvinogara zvakanaka kuti usarudze kusimudzira, nekuti hauna kumbobvira wakachengeteka kubva kumatambudziko nemabhugi akaita saKRACK Iwe haufunge kudaro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Debian, Ubuntu, Linux Mint, Fedora uye Arch Linux vatova immune kuKRACK
openuse yakatozviita nezuro
Fedora 26 yekumisikidza nhanho nhanho